October 14, 2019 - CeleLove
ဝေးဝေးရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားမပီသတဲ့ သူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်များ…
October 14, 2019 Cele Love 0
ဝေးဝေးရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျားမပီသတဲ့ သူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်များ… ယောက်ျားတိုင်းဟာ ယောက်ျားမပီသဘူးဆိုတာ မိန်းကလေးတော်တော်များများ နားလည်ကြမှာပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သင့်ဆီမှာကျတော့မကောင်းဘူး၊ သူများတွေဆီမှာကျတော့ကောင်းတယ် ဆိုတာမျိုးတွေဟာ ယောက်ျားမပီသခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေပါ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ယောက်ျားဖြစ်ပြီး ယောက်ျားမပီသတဲ့သူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုယောက်ျားတွေကိုတော့ ဝေးဝေးရှောင်သင့်ပါတယ်နော် …… (1) ဒီလိုယောက်ျားတွေဟာ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ […]
အားလုံးရင်ထဲမှာ အချိန်တန်ရင် ရင်ထဲက ပွင့်အန်လာမယ့် စကားလုံးတစ်ခု ရှိတယ် …
အားလုံးရင်ထဲမှာ အချိန်တန်ရင် ရင်ထဲက ပွင့်အန်လာမယ့် စကားလုံးတစ်ခု ရှိတယ် … “အောင်လ ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ ” အောင်လအန်ဆန်း ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ထိုးသတ်နေတဲ့အချိန်… Lလွန်းဝါ ဂွမ်မော်တို့ကချင်တွေလည်း အောင်လ ဟက်ကက်တို့ကယားတွေလည်း အောင်လ စောဖိုးခွား စောခူဆဲလ်တို […]
မြန်မာတွေ အတွက် ရှက်ဖို့ကောင်းလာပြီ …..
မြန်မာတွေ အတွက် ရှက်ဖို့ကောင်းလာပြီ ….. အရင်က ဇော်ဂျီသုံးနေရာကနေနိုင်ငံတကာ ခေတ်မီအောင်၊ နိုင်ငံ့အဝှမ်းက သတင်းတွေကို လွယ်ကူစွာ သိခွင့်ရရှိအောင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကမ္ဘာက အမှန်တရားအတိုင်းသိခွင့် ရရှိအောင်၊ (ဒီအထဲမှာ အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကျင့်ပျက်မှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့) လွယ်လွယ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင် […]
မန္တလေး ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲတွင် အမျိုးသားနှစ်ဦးကို အမျိုးသားဆယ်ဦးခန့်မှ ဓါးထိုးမူဖြစ်
မန္တလေး ကျောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲတွင် အမျိုးသားနှစ်ဦးကို အမျိုးသားဆယ်ဦးခန့်မှ ဓါးထိုးမူဖြစ် အောက်တိုဘာ(၁၂)ရက် ညပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် မန္တလေးတောင်ခြေတွင် ကျင်းပနေသည့် ကျောက်တော်ကြီး ဘုရားပွဲဈေးတွင် အမျိုးသားနှစ်ဦးကို အမည်မသိ အမျိုးသားဆယ်ဦးခန့်မှ ဓါးဖြင့်ထိုးမူ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည် … ။ အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ဒေါနဘွားရပ်ကွက်၊ အုတ်စက်ရပ်နေ အသက်(၂၀)ဝန်းကျင်အရွယ် […]
အောင်လနဲ့ပွဲအပြီးမှာ ခံစားရသမျှကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ ဘရန်တန်ဗီရာ (ရုပ် /သံ) ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ ပွဲရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် Century အထူးပွဲကို တိုကျိုမြို့တော်မှာ စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း အောက်တိုဘာ၁၃ မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ် … ။ ညနေပိုင်းပွဲစဉ်နောက်ဆုံးပွဲမှာတော့ ONE ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်နဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံမြန်မာ့စပါးအုံးအောင်လအန်ဆန်ဟာ သူ့ရဲ့ရွှေခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ONE […]
အောင်လအန်ဆန်ကို အားပေးကြမ်း ချစ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ အားကစားကိုချစ်တာထက် ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ အောင်လကိုချစ်တာ နိုင်စေချင်တာ ဒီvideoလေးလဲ ရှယ်ပေးကြပါဗျာ …. ။ အောင်လများ သူ့ကိုဘယ်လိုထိအားပေးတယ်ဆိုတာ သိများ သိမလားပေါ့လေ ဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ပါစေဗျာ ပွဲတိုင်းလဲ အောင်မြင်ပါစေ … ။ ရုပ်သံကြည့်ရန် […]
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အချစ်တော် အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ နောက်ထပ် ဝမ်းသာ စရာ သတင်းကောင်း….
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အချစ်တော် အောင်လအန်ဆန်း ရဲ့ နောက်ထပ် ဝမ်းသာ စရာ သတင်းကောင်း…. ဒုတိယမြောက် ရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်တော့မယ့် ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်းပါ … ။ မြန်မာတွေ အမြဲဂုဏ်ယူနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဖွား ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကတော့ မိသားစုနဲ့အတူ နယ်ခြားမြေခြားမှာ နေထိုင်ပေမယ့်လည်း အမိမြေမြန်မာနိုင်ငံကြီးကို […]